FIKAONAN-DOHA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY (...)
FIKAONAN-DOHA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY FAHASALAMANA
Nosokafan-dRamatoa Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, Pr Elia Béatrice ASSOUMACOU tamin’ny fomba ofisialy ny « Pré-Symposium » mahakasika ny fikaonan-doha iraisam-pirenena momba ny « rohivoahary sy ny fahasalamana », androany 12 novambra 2021 tao amin’ny Akademia Malagasy Tsimbazaza.
Ny Minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, dia miara-miasa amin’ny Governemanta Alemana amin’ny fikarakarana izany.
Nisy ny fifampidinihana an-databatra boribory nokarakaraina notarihin’ireo solontenam-panjakana avy amin’ireo ministera telo voakasika, izay nivondronan’ireo mpikaroka sy manam-pahaizana ary matihanina.
Tanjona ny hametrahana ny vato fehizoron’ny paikadim-pirenena sy ny drafitra ahafahan’i Madagasikara miatrika ny areti-mifindra mety hisy manaraka.
Mitana anjara toerana lehibe eo amin’ny fiarovana sy ny fampivoarana ny zava-manan’aina eto Madagasikara ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa amin’ny alalan’ireo laboratoara fikarohana isan-karazany eo anivon’ny Anjerimanontolo sy ivom-pikarohana nasionaly .
Académie Malagasy TsimbazazaAcadémie Malagasy TsimbazazaAcadémie Malagasy Tsimbazaza